Global Voices teny Malagasy » Mibahana Ireo Fitaovana Ahafahana Midify i Shina, Miaraka Amin’ny Fanampian’ireo Mpamatsy Tolotra “Cloud” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Febroary 2016 4:16 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Tantely
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, GV Mpisolovava
Amin'ny ezaka lavareny ataony mba hanafoanana ny fampiasàna tsy mahazo alàlana ireo fitaovana fihodivirana amin'ny Aterineto, toy ny tolotra proxy sy VPNs, vao haingana izao nifantoka tamin'ireo mpamatsy tolotra fitahirizana “cloud” (rahona) ny sampana mpandrindra an'ny fanjakàna Shinoa ho an'ireo tambajotra mpampiely votoaty .
Toa hita ho mangataka fanampiana bebe kokoa avy amin'ireo lehilahy mpanelanelana ireo ankehitriny ireo Shinoa manampahefana mpandrindra, mba hanampy amin'io ezaka io. Ho valin-kafatra amin'ilay famoretana vao haingana avy amin'ireo Shinoa manampahefana mpandrindra, namoaka taratasy ho an'ireo mpanjifany  ny Microsoft Azure Shina, izay mpamatsy mpandrakitra “cloud” ho an'ireo CDNs lehibe, nilazàna tamin'izy ireo fa noesorina daholo ireo fihodivirana tsy ara-dalàna rehetra, proxy sy ny tolotra VPN izay niantrano tao amin'ny lohamiliny.
Nivezivezy tao amin'ny Twitter sy ireo bilaogin'ny teknolojia ilay taratasy ary nivaky  toy izao :
Angamba ilay ezaka fanesorana ireo fitaovana fihodivirana rehetra amin'ny tolotry ny mpamatsy vontoaty eo an-toerana mety hoe valin'ireo ezak'ireo mpikaroka momba ny rafitra fanivanana ao Shina, izay taona lasa maromaro izay, nitady ny hampihatra fomba fiady “fahalalahana azo antoka” , izay nanomezan'izy ireo hevitra hoe afaka mampiantrano proxy sy tolotra fihodivirana ireo CDNs sangany erantany. Nampananosarotra ireo mpanivana amin'ny fibahanana ireo tolotra moa io, raha tsy hoe angaha manapaka tanteraka ilay tambajotra manontolo ary mitaty ireo fiantraikany ara-toekarena.
Hatreto aloha, nanandrana hatrany ny governemanta Shinoa ny hibahana ireo fitaovana fihodivirana mialokaloka amin'ny CDNs. Ohatra lehibe izao, ny fanapoizinana ny DNS tamin'ny tetikasa greatfire.org  ka nahatonga fibahanana vohikala an'arivony.
Hatramin'ny volana Janoary 2015, voabahana ny tolotra isankarazan'ireo mpamatsy VPN maro, tafiditra tamin'izany ny Astrill sy ny StrongVPN. Ho valin'ilay fibahanana, nandroso hevitra i Fang Binxing, ny rain'ilay antsoina hoe Great Firewall ao Shina, hoe tokony hisoratra anarana any amin'ny Ministeran'ny Indostria sy Teknolojian'ny Fampahalalambaovao (MIIT) ireo orinasa mampiasa ny VPN any Shina. Nilaza ihany koa  ny tomponandraikitra ao amin'ny MIIT fa tokony hanaraka ireo lalàna Shinoa ireo vohikala avy any ivelany, ary tokony hampidirina ilay “fomba fiasa vaovao” mba hamaha ilay olana. Fomba entina handrindràna  ny fisoratana anarana ilay “fomba fiasa vaovao”, ary ny fanarahana maso ireo mpamatsy rindrambaiko sy fitaovana materialy ho an'ny Aterineto ho an'ny filaminana.
Tamin'ny fanitsiana ilay Lalàna momba ny Heloka Bevava 2015, izay nihatra ny 1 Novambra 2015, nanome antony araka ny lalàna mba hanenjehana ireo mpandrafitra fitaovana fihodivirana tsy ara-dalàna, ireo mpamatsy tolotra fihodivirana, ary ireo mpamatsy fialokalofana ho an'ireo tolotra fihodivirana, ilay vontoaty vaovao mikasika  ny tsy fampiharana ny fiarovana ny loharanombaovao, ny fampiasàna tsy ara-dalàna ny Aterineto, ary ny fanampiana ny fanaovana heloka amin'ny Aterineto.
Na dia talohan'ny nandaniana ilay fanovàna aza, efa noteren'ny polisy ireo mpandrafitra fitaovana fihodivirana mba haka  ny kaodiny any amin'ny GitHub. Notafihan ‘ny Great Cannon taty aoriana kely ilay sehatra noho ny fampiantranoany ny tetikasa Great Fire. Hita ho toy ny fitsmbadihana ratsin ‘ireo fomba fanivanan'i Shina ilay fanafihana.
Roa herinandro taorian'ny nahalany ilay fanovàna ny lalàna momba ny heloka bevava ary herinandro taorian'ilay fanafihana tany Parisy ny volana Novambra, manakatona  ny tolotra finday ho an'ireo mponina amin'ny faritra Xinjiang misy ny foko vitsy an'isa ireo mpamatsy tolotra finday, maro amin'ireo no mampiasa VPNs amin'ireo findainy. Afaka averina mandeha indray ny tolotr'izy ireo aorian'ny fanolorantenan'izy ireo any amin'ny polisy.
Milaza ilay taratasin'ny Azure China fa mamaly mavitrika ireo fangatahan'ireo manampahefana ankehitriny ireo mpamatsy tolotra. Satria napetraka ho laniana ny faramparan'ity taona ity ilay volavolan-dalàna mikasika ny Lalànan'ny Fiarovana amin'ny Aterineto , izay handrindra ny fanivanana sy ny fomba fanarahana maso, mety ho voatery handray fepetra mavitrika ireo mpamatsy tolotra avy any ivelany mba hanampiana ireo manampahefana amin'ny fakàna ireo angon-drakitra manokan'ireo mpanjifany. Mety ho fepetra hafa tsy maintsy arahana indray izany rehefa hiditra amin'ny tsena Shinoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/12/78609/
 tambajotra mpampiely votoaty: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network
 namoaka taratasy ho an'ireo mpanjifany: https://twitter.com/bitinn/status/686882248537194496
 fomba fiady “fahalalahana azo antoka”: https://en.greatfire.org/blog/2015/mar/collateral-freedom-and-not-so-great-firewall
 fanapoizinana ny DNS tamin'ny tetikasa greatfire.org: https://en.greatfire.org/blog/2014/nov/china-just-blocked-thousands-websites
 Nilaza ihany koa: http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2015-01/28/content_19430931.htm
 Fomba entina handrindràna: http://news.xinhuanet.com/politics/2015-01/21/c_127408191.htm
 ilay vontoaty vaovao mikasika: https://xiaolan.me/lawandgfw.html
 Lalànan'ny Fiarovana amin'ny Aterineto: https://advox.globalvoices.org/2015/07/11/legalizing-the-great-firewall-chinas-new-cyber-security-law-would-codify-censorship-shutdowns/